2018 Oscar ဆုရတဲ့ထဲမှာ ကြိုက်မိတဲ့ ဇာတ်ကားတွေများပါဝင်နေမလား??? - MoviesFan
2018 Oscar ဆုရတဲ့ထဲမှာ ကြိုက်မိတဲ့ ဇာတ်ကားတွေများပါဝင်နေမလား???
ဒီနေ့ကတော့ 2018 Oscar ပွဲကြီးကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ winner ဆုရှင်တွေအတွက် 24 categories ရှိပြီး Oscar Nominations 2018 မှာ အများဆုံးရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ ဒါရိုက်တာ Guillermo del Toro ရဲ့ “The Shape of Water” category ၁၃ ခုမှာ နေရာယူထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့
“Dunkirk” ရုပ်ရှင်က ၈ နေရာယူထားတာတွေ့ရပြီး Martin McDonagh ရဲ့ “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” ရုပ်ရှင်ကတော့ ၇ နေရာယူထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်ဇာတ်ကားတွေက category အသီးသီးမှာ Winner အဖြစ်နေရာယူထားလည်းဆိုကို အောက်က full list မှာ ကြည့်လိုက်ကြစို့နော်။
ACTOR IN A LEADING ROLE -Gary Oldman (DARKEST HOUR)
ACTRESS IN A LEADING ROLE – Frances McDormand (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI)
ACTOR IN A SUPPORTING ROLE – Sam Rockwell (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI)
DIRECTING – THE SHAPE OF WATER
DOCUMENTARY (FEATURE) – ICARUS
DOCUMENTARY (SHORT SUBJECT) – HEAVEN IS A TRAFFIC JAM ON THE 405
MUSIC (ORIGINAL SCORE) – THE SHAPE OF WATER
MUSIC (ORIGINAL SONG) – “Remember Me” from COCO
SHORT FILM (ANIMATED) – DEAR BASKETBALL
SHORT FILM (LIVE ACTION) – THE SILENT CHILD
WRITING (ADAPTED SCREENPLAY) – CALL ME BY YOUR NAME
WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY) – GET OUT
Previous Post: Avengers: Infinity War ပြသရက်အရှေ့တိုး
Next Post: Frances McDormand ရဲ့ အော်စကာဆုကိုခိုးသွားသူ ခိုးရာပါအော်စကာရုပ်တုနဲ့အတူ Facebook မှာ Live လွှင့်ခဲ့